[Vaovao hariva] Zoma 22 janoary 2021
Naseho ny : 22 janoary 2021
Maherin'ny 3600 ny traboina, iray no namoy ny ainy. Ny sekoly sy ny lalana ary ny tranom-panjakana no tena nahasimbana, vokatry ny fandalovan'ilay rivodoza Eloïse farany teo. Faritra fito no tena voakasika mivantana teto amintsika, fa Analanjorofo sy Boeny no tena voa mafy, raha ny tatitry ny BNGRC, io tolakandro io...
[Vaovao antoandro] Zoma 22 janoary 2021
Misy mikasa hivarotra tany amin'ny vahiny any Nosy-Be, raha ny tatitry ny filohan'ny filankevitra monisipaly any an-toerana sady Loholona teo aloha, Joseph Yollande. Milaza ny tsy hanaiky izany, hoy izy, ny mponina any an-toerana ka mikasa ny hanao hetsika ho fenoherana izany...
[Vaovao maraina] Zoma 22 janoary 2021
♦ Namoizana ain'olona iray tany Maroantsetra, raha ny fantatra aloha hatreto, ny rivodoza Eloïse. Tafakatra 2804 kosa ireo olona traboina... ♦ Olona 33 tamin'ireo 44 natao fitiliana no voamarina fa tratran'ny Coronavirus, teny amin'ny tranon'ny mpianatra teny Ankatso...
[Vaovao hariva] Alakamisy 21 janoary 2021
Naseho ny : 21 janoary 2021
♦ Olona telo amby telopolo no voamarina fa tratran'ny Coronavirus eny amin'ny tranon'ny mpianatra eny Ankatso. Efa nisy tranga hafa koa hita eny amin'ny Oniversiten'Antananarivo, raha ny fanazavan'ny filohany, androany... ♦ Nitondra fanazavana misimisy kokoa momba ilay fe-potoana 48 ora nomen'ny fitondrana ny Jirama ny mpitondra tenin'ny governemanta androany...
Pejy 2 amin'ny 106